XOG Dagaalkii 3-aad Israel oo Dishey Saynisyahan Ugu Sareeya Iran,Iran Gantaalo Ku Jeedey Sucuudiga iyo Israel - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOG Dagaalkii 3-aad Israel oo Dishey Saynisyahan Ugu Sareeya Iran,Iran Gantaalo Ku Jeedey Sucuudiga iyo Israel
November 27, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 1
Wasaaradda gaashaandhigga ee Iran ayaa xaqiijisay dilka saynisyahankii caanka ahaa ee reer Iran ee nukliyeerka Mohsen Fakhrizadeh, kaas oo la wareegay hoggaanka hay’ada cilmi baarista iyo horumarinta.
Wasaaradda ayaa ku sheegtay – bayaan ay soo saartay – in Mohsen Fakhrizadeh uu si xun u dhaawacmay ka dib markii gaarigiisa lagu bartilmaameedsaday meel u dhow Tehran oo ay weerareen kooxdii la socotay. Waxay tilmaamtay inuu ku dhintay isbitaalka ka dib isku dayo ay dhaqaatiirtu ku doonayeen inay ku soo kiciyaan.
Reer Galbeedku waxay in badan ka shakisanaayeen Mohsen Fakhrizadeh maskaxdii ka dambeysay barnaamij qarsoodi ah oo lagu horumarinayo bam nukliyeer Iran.
La Taliyaha Hogaamiyaha Iran ee Arimaha Difaaca ayaa carabka ku adkeeyay in hay’ada Sahyuuniyada ay riixeyso dagaal dhan walba ah, ayna bixin doonto qiimaha dilkii
Madaxa Shaqaalaha Iiraan Muxammad Bagheri ayaa balan qaaday wax uu ku tilmaamay aargoosi adag oo sugi doona kooxaha argagixisada iyo madaxdooda masuulka ka ah dilkan.
Dhanka kale, Taliyaha Guud ee Ilaalada Kacaanka Iiraan, Major General Hossein Salami, wuxuu yiri, “Dilkii loo gaystay saynisyahannadeena nukliyeerka waa iska hor imaad cad oo looga hortagayo Iran inay hesho tikniyoolajiyadda casriga ah.”
Bagheri wuxuu yiri: Kama waaban doonno inaan raacno oo aan ciqaabno kuwa ka masuulka ah dilkii aqoonyahan Mohsen Fakhrizadeh.
DEG DEG:Qarax Ismiidaamin oo ka Dhacay Muqdisho Ilaa Dhawaca 10 Qof oo La Xaqiijiyey
Xagjirrada sahnuuniyadeed ee gabboodka iyo gaashaanka shuruud la’aanta ahaa ka haystay daquudka uu Rabbi halligay ee Donald Trump ayaa kujira firixdii ugu dambeysay inta aanay siyaasaddu isbeddelin bisha January. Waxaa la hadalhayaa inay daaquudka Trump iyo xulufadiisa caalamku (sida Netanyahu iyo Bolsonaro) ku heshiiyeen inay waxii karaankooda ah ay wax sii kharbudaan oo dunida qas cusub ka sameeyaan ayaamaha daaquudkan u baaqiga ah. Waynu ogayn iskudaygiisii laga fashaliyay ee kuduulidda Iraan.
Anigu shakhsi ahaantayda aad ayaan u jeclaa in Iraan la jilciyo oo awooddeeda baalasha laga rifo maadaama ay xawaar aan caadi ahayn ugu socoto hanashada hubka nuukliyarka ah. Iraan ayaa kun jeer caalamka Islaamka uga halissan waddamada gaaleed oo iyagu cabsidooda Islaamka ay salka ku hayso in xadaaradda ay awalkii horeba Islaamka ka dhaxleen mar kale laga la wareego. Iraaniyiintu se neceyb gaamuray oo ciribtirka Islaamka Sunniga kusaleysan aawadii ayay halgan culus uugu jiraan sidii ay uga gacan sarreyn lahaayeen.